Pano iwe unopa zveiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Pro | IPhone nhau
Iwe unoda kuziva kuti iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ichave yakaita sei? Pano unazvo
Izvi zvinonakidza: maminetsi mashoma apfuura, iyo webhu uswitch atumira, kuburikidza OnLeaks, mimwe madhayagramu kana madudziro anotiratidza zvakadzama kuti iPhone 7 ichave yakaita sei. Ini ndinoti "ivo" nekuda kwekuti, sekureba sekushandurwa uku kuri kwechokwadi, pachave nemadhizaini maviri: imwe yeiyo iPhone 7 uye mumwe wake iPhone 7 PlusYechipiri iine kamera yakakura kwazvo kupfuura iyo "yakajairika" modhi. Gomba rakakwenenzverwa rinofanirwa kunge riine iyo mbiri kamera iyo yakave nerunyerekupe kwenguva yakareba.
Sezvauri kuona mumufananidzo unotevera, iyo 7-inch iPhone 4.7 ichave iine gomba kune iyo kamera yakakura kwazvo, iyo inoratidza kuti ichave yakasiyana neiyo inosanganisirwa muma iPhone 6s. Tichitarisa kuzasi, iyi mifananidzo "yaizosimbisa" kuti inotevera foni pane block haizove ne3.5mm headphone port, asi hauone mutauri wechipiri uyo, kunyangwe chiri chokwadi kuti hausati wave wekupedzisira, angadai akavandudza zvakanyanya odhiyo yemhando yapfuura.
Paisazove ne iPhone 7 Pro.Iyo iPhone 7 Plus yaizove neayo maviri kamera
Kubva pamifananidzo, a chechitatu hole muchikamu chatiri kuwana parizvino chiedza chemwenje uye iyo FaceTime kamera. Ndiri kuona mikana miviri: kuti kune zvakare kamera mbiri pamberi, izvo zvinoita kunge zvisingaite, kana kuti ivo vanowedzera sensor nyowani kuyera ruvara rwezvakatipoteredza iro raizoshandiswa kune inonzi True Tone skrini yatove inowanikwa mu9.7-inch iPad Pro.
Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, iyo iPhone 7 Plus, pamusoro pegomba rambotaurwa rakakura reiyo mbiri kamera, yaizosanganisira iyo Smart Connector iyo Mac Otakara yakati havasi kuzosanganisira, saka iyo Plus modhi yeapuro foni inotarisirwa kusanganisira zvimwe zvinokatyamadza kana ichizoratidzwa, kana iri senge iri mune idzi marevhuru, anotevera Gunyana. Chinhu chakanyanya kushata uchave mutengo uyo, kana tichifunga kuti iyo 6GB iPhone 128s Plus yatodarika € 1.000, iyo iPhone 7 Plus ine mbiri kamera uye Smart Connector inodhura sei? Nhau dzakanaka ndedzekuti masosi haataure nezve Pro modhi, chishandiso chinenge chakatemerwa mutengo. Kana ichikosha € 1.200, ungaitenga here? Zvirinani kumirira mharidzo yako kuti ipindure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iwe unoda kuziva kuti iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ichave yakaita sei? Pano unazvo
Ini ndinotenga iyo yekuwedzera kana iyo PRO chero iri nani !!! Zvisinei nezvaunofanira kuchengetedza.
Kwaziso kubva kuArgentina.
Handifunge kuti vanoisa inodarika chiuru chemari pairi. Chokwadi vanodzikisa tambo yazvino kuti vasiye iwo iwo mutengo (1000) kumusoro kwepfupa renji, iyo iPhone 1000.
Facebook inotangisa Nguva muEurope neCanada, pasina kuzivikanwa kwechiso